Mataqaan Cibaado Maxamed Tarabi? – Rasaasa News
Mar 17, 2010 cibado, Jwxo-shiil, ONLF
Afeef: hadii uu ruuxu siyaasad galo laguma tixgaliyo jinsiga uu dadka ka yahay ee waxaa loola dhaqmi ruux siyaasi ah. Xogo aan hore loo ogayn oo ku saabsan dilkii Dr. Maxamed Siraad Dolal, January 19, 2009, fiidnimo Talaado ah abaarihii 8:00 PM saacad Afrikada Bari, waxaa ila soo hadlay Dhabuuke Ceelaabe, wuxuuna igu yidhi “Dr. Dolal waa dhawac waana uu fiican yahay, bari ka horna idin lama soo hadli karo ee gaadhsii qoyskiisa iyo hogaamada ONLF” sidaasna waxaa tidhi Cibado Maxamed Tarabi.
Waxaa argagax iyo naxdin ku noqotay dadweynaha Somalida Ogadeeniya in TV Ethiopia laga sheego geerida halgame Dr. Dolal oo ahaa xidiga halganka ururka ONLF [row model of ONLF]. Ka dib laba moolmood oo jaha wareer iyo argagax ah waxaa xaalada badashay gabadh la yidhaahdo Cibaado Maxamed Tarabi oo xiligaasi joogtay Xerada Qaxootiga ee Dhadhaab, Cibaado waxay dadka ugu bishaaraysay in uu Dr. Dolal nool yahay, waxayna tidhi Dhabuuke ayaa ila soo hadlay oo yidhi “Dr. Dolal wuu nool yahay wuuna ila joogaa, dhaawac ayaana soo gaadhay barina wuu hadli doonaa, ee gaadhsii qoyskiisa iyo hogaamada ONLF.” Kolkaas ayaa dadkii kacsanaa ay niyadu u degtay, meel walba oo aduunka ah waa lagala hadlay waxayna xaqiijisay arintaas.
Afar maalmood ka dib maydkii Dr. Dolal waxaa la soo dhigay bogg Internet ah. Mar labaad ayey rubadu go,oday dadweynihii jeclaa nolosha Dr. Dolal, dib la isuma waydiin sheegidii nololeed ee Cibaado Maxamed Tarabi ku sheegtay Dr. Dolal.
Cibaado Maxamed Tarabi waa tuma? Cibaado waxaa ay ka mid ahayd gabdhihii la shaqayn jiray Jabhada ONLF, ee kaga biirtay magaalada Qabridahare, laakiin ma ayna noqon caan, waxayna dhalasho ahaan Ilma Adeer ahaayeen Dr. M S Dolal. Cibaado Waxaa la sheegaa in ay ahayd gabdhii Bomkii Jijiga tuurtay, kaas oo uu ku dhaawacmay Cabdulahi Xasan [Lug buur], oo xilgaas ahaa madax Kaalinka 5aad. Cibaado waxay u baxsatay dalka Kenya halkaas oo ay ku noolayd, intii ayna goor dhaw ka soo galin dalka Sweden.
Waxaa lagu baraarugay, Cibaado oo ay xaflad u samaynayaan kooxda Jwxo-shiil, waa arin aan wali hore uga dhicin dalalka Yurub intii dad nooc walba leh soo galaysay “xaflad dan leh”.
Waxaa la isweydiiyey waa kuma ruuxan haweenka ah ee ay kooxda Jwxo-shiil xaflada u samaynayso. Cibaado waxay xaas u tahay oo soo gashaday wiil u dhashay Gabalada Nogbeed, oo na loogu sheegay magaciisa Cabdi Naasir Gadhweyne eeggana madax ka ah Jaaliyada Jiraban ee kooxda Jwxo-shiil ka taageerta dalka Sweden.
Cibaado, ayaa waxaanu helay telefoonkeeda, waxaana noo suurto gashay in aanu Cibaado Waraysi kala yeelano waxa dhabta ah ee ay kala socoto dilkii Dr. Dolal iyo arimo badan oo kale, xili maalin ah oo uu saygeedu shaqo ku maqan yahay, waraysiga oo ahaa sheeko khadka telefoonka nagu dhexmartay ayaanu u badalay qoraal.
Xogahaas oo hore u daahnaa ayaanu idiin soo dayndoonaa koldhaw……
rasas baa runta sheegee rafiiqaaga ka yeelo.
Jwxo-shiil oo Lagu Daaweynayo Isbitaalka The Orota Referral Hospital ee ku Yaal Magaalada Caasmara.